केयरगिभरको स्वयम् हेरचाहको मार्गनिर्देशन र देखभालकर्ता बर्नआउट त्याग्दै - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर खेलहरु समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी समाचार भारी खेल औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> कल्याण >> हेरचाहकर्ताको आत्म देखभालको लागि मार्गनिर्देशन र केयरगेवर बर्नआउट बेवास्ता गर्दै
हेरचाहकर्ताको आत्म देखभालको लागि मार्गनिर्देशन र केयरगेवर बर्नआउट बेवास्ता गर्दै
कल्याण जोखिम कारक, बर्नआउट को संकेत, र देखभालकर्ता बर्नआउट को खतरा कसरी कम गर्न सिक्नुहोस्
एक हेरचाहकर्ता कुनै अर्को व्यक्तिको लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को स्तर लिन्छ जो कोही हो। यो एक परिवारको सदस्य, साथी, वा घर स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता हुन सक्छ। हेरचाह गर्नेहरूले हरेक दिन निःस्वार्थता, प्रतिबद्धता, र कर्तव्य प्रदर्शन। तर तिनीहरूले भावनात्मक र शारीरिक बोझ पनि लिन्छन् जुन भारी बन्न सक्छन्।
केयरिभर बर्नआउट भनेको के हो?
केयरगेइवर बर्नआउट सम्पूर्ण थकानको अवस्था हो जुन भावनात्मक, शारीरिक, र मानसिक टोलले ल्याएको हुन्छ अर्को व्यक्तिको आवश्यकताहरूको लागि जिम्मेवार ठान्ने।
कसरी हेरचाहकर्ता बर्नआउट सुरू हुन्छ?
धेरै जसो केसहरूमा केयरिभर बर्नआउट भावनात्मक थकानको साथ सुरू हुन्छ। कसैको महत्वपूर्ण आवश्यकताहरूको लागि प्रदान गर्ने तनाव र बोझले व्यक्तिको सामर्थ्यको क्षमता हटाउन सक्छ। रीस, उदासी, र डर जस्ता भावनाहरू सामान्य भन्दा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
शारीरिक थकान अक्सर अनुसरण गर्दछ। हेरचाहको लागि प्रायः नयाँ शारीरिक मागहरू आवाश्यक हुन्छ र व्यायाम जस्तो शारीरिक गतिविधिमा कमी आउँछ। एक व्यक्ति सुस्त महसुस गर्न सक्छ किनभने तिनीहरू अब बिहानको हिंड्न मा गएनन्। अर्को व्यक्तिको मांसपेशीमा दुखाइ हुन सक्छ किनकि उनीहरूले नुहाउनुपर्दछ र कसैलाई लुगा लगाउँनुपर्दछ, वा कतै अपरिचित सुताउनु पर्छ।
भावनात्मक र शारीरिक थकावटको संयोजनले मानसिक थकावट निम्त्याउन सक्छ। हेरचाहकर्ताले साधारण गल्तीहरू गर्न सुरू गर्न सक्छ जस्तै अपोइन्टमेन्टहरू बिर्सिनु वा मनपर्दो नुस्खाको मुख्य कुञ्जी छोड्नु। आरामदायी निद्रा गाह्रो हुन सक्छ, र एक हेरचाहकर्तालाई सामाजिक कुराकानीको लागि प्रेरणाको अभाव हुन सक्छ। यो तब हो जब थकाइ बर्नआउट चरणमा पुगेको छ।
यदि हेरचाहकर्ता बर्नआउट सम्बोधन गरिएको छैन भने यसले देखभालकर्ता डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ - हेरचाहकर्ता र उनीहरूले हेरचाह गरिरहेका व्यक्तिलाई लागी खतरनाक अवस्था। डिप्रेसन प्राय: बेकम्मापन, उदासीनता वा चिढचिढाहटको भावनाहरू द्वारा चिनिन्छ, जसले कहिलेकाँही आफूलाई वा अरूलाई चोट पुर्‍याउने पुरानो नकारात्मक विचारहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि तपाईं वा कुनै प्रियजनले गम्भीर उदासीनता वा आत्महत्या विचार र आचरणको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा आपतकालीन कोठाबाट तुरुन्त सहायता लिनुहोस्। तपाईं पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन 800-273-TALK (8255) मा।
हेरविचार किन यत्तिको थकाउने हो?
यसको आवश्यक समय र उर्जाका कारण Caregiving थकाउने हुन्छ। जब तपाइँ मन पराउनुहुन्छ कसैले पनि आफूलाई लागी पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन, तपाइँ तिनीहरूलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ। तर जब तपाइँ खाना तयार गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई क्रमबद्ध गर्दै, वा तिनीहरूलाई बाथरूमको उपयोग गर्न मद्दत गर्दै, तपाईं ऊर्जा र घण्टा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन सामान्यतया तपाईंको आफ्नै कल्याणको लागि समर्पित हुन्छ।
अन्त मा, थकान अक्सर चीजहरु को लागी तपाइँ रमाईलो गर्न को लागी क्षमता गुमाउनु हो र तपाइँलाई बनाउँछ, को लागी आउँछ।
केयरगेवर बर्नआउटको जोखिम कारकहरू के हुन्?
सबै देखभालकर्ताहरूले हेरचाह गर्ने बर्नआउट पाउँदैनन्। तर ती गर्नेहरूमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले केहि जोखिम कारकहरू पहिचान गरे कि caregivers बनाउन को लागी बर्नआउट पीडित को लागी सम्भव छ। जो कोहीसँग यी जोखिम कारकहरू छन् उनीहरूले बर्नआउट अनुभव गर्न सक्दैनन्, र यी कारकहरूमध्ये कुनैपनि व्यक्तिहरू जसरी भए पनि बर्नआउट अनुभव गर्न सक्दछन्।
अझै, यी जोखिम कारकहरूको समीक्षा गर्न र तपाईंलाई लागू हुने कुनै पनि कुराको बारेमा सचेत हुन लायक छ।
शारीरिक रूपमा कार्यको माग गर्दै (जस्तै कसैलाई बाथटबबाट बाहिर निकाल्दै)
कसैको ख्याल राख्दै गम्भीर व्यवहार समस्या छ (अर्थात्, डिमेंशिया), शारीरिक मात्र होइन
तपाईको ख्याल राख्नु भएको व्यक्तिको साथ बस्नु
साथी वा समर्थन नेटवर्कको अभाव छ
केयरटेकरको रूपमा खर्च गरिएको समय वा लामो अवधिको उच्च प्रतिशत
पदार्थ दुर्व्यवहारको इतिहास
हेरचाहकर्ता बर्नआउट को संकेत के हो?
केहि संकेतले सम्पूर्ण थकावट वा केयरिभर बर्नआउटलाई संकेत गर्दछ। यदि तपाईं एक हेरचाहकर्ता हुनुहुन्छ वा कसैलाई हेरचाह गर्ने हुनुहुन्छ भनेर चिन्नुहुन्छ भने, निम्न संकेतहरू खोज्नुहोस्।
निरन्तर चिन्तित महसुस
पर्याप्त निन्द्रा पाइरहेको छैन, वा धेरै सुतिरहेको छैन
वजन लिने वा हराउने
तपाईंले ख्याल राख्नु भएको व्यक्तिमा रिसाएको महसुस हुन्छ
सजिलै चिढचिढो महसुस
साथी र परिवारलाई वेवास्ता गर्दै
दु: खी वा निराश महसुस
बारम्बार शरीर दुख्ने, जस्तै टाउको दुख्ने
रक्सी, ड्रग्स, वा पर्चेको औषधिहरूको प्रयोग बढाउँदै
धेरै चोटि बिरामी पर्ने
यिनीहरू मध्ये कुनै पनि लक्षण अनुभव गर्ने हेरचाहकर्ताले उनीहरूको डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्दछ।
केयरगेवर तनाव र बर्नआउट मापन गर्दै
को Zarit Burden साक्षात्कार हेरचाहकर्ता बोझ पहिचान गर्नको लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको डायग्नोस्टिक उपकरण हो।
यदि तपाई अत्यधिक देखभालकर्ता तनावको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न, यसलाई लिने विचार गर्नुहोस् Caregiver स्वास्थ्य आत्म आकलन प्रश्नावली त्यो अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशनले विकसित गरेको थियो।
केयरगेवर बर्नआउटबाट कसरी बच्ने
अब तपाइँसँग एक हेरचाहकर्ता बर्नआउट के हो भनेर बुझ्ने क्षमता छ, यसलाई कसरी चिन्ने र कसले यसलाई पाउने सम्भावना छ। बर्नआउट वेवास्ता गर्न को लागी १२ प्रमाणित तरिकाहरु यहाँ छन्।
१. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई आफैले ब्रेक पाउनुभयो
केयरटेकिंगका लागि त्यहाँ पज बटन छैन। सबै हेरचाहकर्ताले केवल टाढा हिँड्न चाहेको महसुस गरेको हुन सक्छ, तर तिनीहरू बुझ्छन् कि त्यसो गर्नु तिनीहरूमा निर्भर रहेको व्यक्तिको लागि विनाशकारी हुन सक्छ। तपाइँ यसलाई यस बिन्दुमा पुग्न दिन चाहनुहुन्न।
त्यसकारण तपाईंको दैनिक तालिकामा ब्रेकहरू लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। छोटो ब्रेकले तपाईंको मानसिक दृष्टिकोणमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
केहि अवस्थाहरूमा, तपाईंले हेरचाह गरिरहनु भएको व्यक्तिले आफैंमा केही घण्टा ब्यवस्थापन गर्न सक्दछ, त्यसैले तपाईं भाग्न सक्नुहुनेछ। अरू कम्तिमा आफूलाई मनोरन्जन गर्न सक्षम हुन सक्छ जब तपाईं अर्को कोठामा हुनुहुन्छ।
मेलाटोनिन को कति मिलीग्राम लिन को लागी
यदि तपाइँ कसैलाई निरन्तर सुपरिवेक्षण चाहिन्छ भने मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले तालिकाबद्ध ब्रेकको बारेमा सक्रिय हुनुपर्दछ। यसको अर्थ एक छिमेकी, मित्र, वा परिवारको सदस्यलाई समय समयमा मद्दत गर्नको लागि ड्राफ्टि mean गर्न सक्दछ। वा यसको मतलब गृह स्वास्थ्य सेवा कामदार हप्तामा केही दिन रोक्नको लागि हुन सक्छ।
हामीले पहिल्यै सिकिसकेका छौं कि एक हेरचाहकर्ताको रूपमा खर्च गरेको एक उच्च प्रतिशत बर्नुआउटका लागि जोखिम कारक हो। आराम गर्न र रिचार्ज गर्न आफैंमा समय छ भनेर निश्चित गर्न तपाईंले सक्नुहुने सबै गर्नुहोस्। यो तपाईका लागि र तपाईका ख्याल राख्नु भएको व्यक्तिको लागि उत्तम चीज हो।
२. उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् जसले साझेदारी अपडेटलाई सरल बनाउँछ
एक प्राथमिक हेरचाहकर्ता एक स्वास्थ्य सेवा कर्मी मात्र हैन, तिनीहरू एक पत्रकार पनि हो। करीव परिवार र साथीहरूले लक्षणहरू, रोगनिदान, कसरी उनीहरूको औषधीले काम गरिरहेको छ, व्यक्तिले के खाइरहेको छ, र अधिक जस्ता विषयहरूमा अपडेटहरूको आशा गर्दछ।
व्यक्तिगत कल वा ईमेलहरू राम्रो छन्, तर समय खपत हुने। जब एक हेरचाहकर्ताले उनीहरूलाई आफूले चाहे जति नै अद्यावधिकहरू प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छन्, तिनीहरू यसको बारेमा दोषी महसुस गर्न सक्छन् जसले उनीहरूको बोझलाई थप गर्दछ।
उपकरण जस्तै CaringBridge , PostHope , वा MyLifeLine संचारलाई सजिलो बनाउनुहोस्। यी साइटहरूले तपाईंलाई एकैसाथ अपडेटहरू पोष्ट गर्न दिन्छ - तपाईंको प्रियजनको गोपनीयतालाई सुरक्षा गर्नको लागि।
सबैसँग साझेदारी गरिएको एकल अपडेटले मिसकम्मानेक्सनको जोखिमलाई पनि कम गर्दछ। सबैजना उस्तै जानकारी हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू छोडेको महसुस गर्दैनन्।
Online. अनलाइन श्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्
प्रत्येक हेरचाहकर्ताको ईन्टरनेट पहुँच संग एक उपकरण हुनु पर्छ। महत्वपूर्ण सल्लाह र महत्वपूर्ण संसाधनहरू प्राय केहि क्लिकहरू टाढा हुन सक्दछ।
धेरै उदाहरण मध्ये एक हो एल्डरकेयर लोकेटर । यो निःशुल्क संसाधन साइट, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग द्वारा निर्मित, एक स्वच्छ, पढ्न योग्य डिजाइन र भरोसेमयी लिंक छ। केहि क्लिकहरूमा, तपाईं बीमा, यातायात, र घर हेरचाह संसाधनहरूसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
हेरचाहकर्ताका लागि धेरै अन्य अनलाइन संसाधनहरू परामर्श योग्य छन्, जस्तै अनलाईन समर्थन समूहहरू र स्थानीय घर स्वास्थ्य संगठनहरू।
A. समर्थन समूहमा शामिल हुनुहोस्
समर्थन समूहमा भाग लिनु एउटा उत्तम तरिका हो जुन एक देखभालकर्ताले उनीहरूको सीमित खाली समय प्रयोग गर्न सक्दछ। केयरिगेभिंग अलग र निराशाजनक हुन सक्छ। सबैभन्दा आधारभूत तहमा, समर्थन समूहले हेरचाह गर्नेहरूलाई सम्झाउँदछ कि त्यहाँ त्यस्तै चुनौतिहरूको सामना गर्ने अरू पनि छन्।
तर गहिरो तहमा, समर्थन समूहले मार्गदर्शनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ जुन अनुभवमा आधारित छ। र एक हेरचाहकर्ताले अरूको जस्तै उनीहरूको सफलता र असफलता अन्य समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गरेर अरूलाई मद्दत गरेको सन्तुष्टि र क्याथारसिस महसुस गर्न सक्दछ।
यी साझा अनुभव मा बंधन अक्सर मित्रता को लागी। परिवार र मित्रहरू जति सहयोगी हुन सक्छन्, तिनीहरू केवल तपाईंको सहानुभूति देखाउन सक्छन् जुन तपाईं जानुहुन्छ। एक साथी हेरचाहकर्ता बोझ साझा र तपाइँलाई सहकर्मी वा टीममेट जस्तै समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ।
Regularly. नियमित रूपमा आत्म-मूल्या assessment्कन परीक्षा लिनुहोस्
देखभालकर्ता बर्नआउट सबै एकैचोटि हुँदैन। भावनात्मक, शारीरिक, र मानसिक थकावट समयको साथ एकत्रित हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा बेन्चमार्क ट्र्याक गर्नुहुन्छ भने तपाईं बर्नआउटबाट बच्ने उत्तम अवसर खडा गर्नुहुन्छ। नियमित रूपमा आत्म-मूल्या test्कन परीक्षा लिनु (यदि एक महिनामा एकचोटि भन्नुहोस्) ले तपाईंलाई कत्ति राम्रोसँग सामना गरिरहनु भएको छ भन्ने बारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिनेछ।
आत्म आकलनले तपाईका भावनाहरु र तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा आधारभूत प्रश्नहरु सोध्छ। तिनीहरूले १० देखि १ 15 मिनेट भन्दा बढी लिन हुँदैन। हामी सिफारिस गर्दछौं Caregiver स्वास्थ्य आत्म आकलन प्रश्नावली , जो अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विकसित गरिएको थियो।
oxycodone हाइड्रोक्लोराइड oxycontin जस्तै छ
यस सानो-समय लगानीले तपाईंलाई बर्नआउटको नतिजा बचाउन सक्छ।
Other. अन्य साथीहरू र परिवारसँग सकरात्मक सम्बन्ध कायम राख्नुहोस्
जब एक प्रियजन स्वास्थ्य संकट बाट गुज्रिरहेको छ, सबैजना मद्दत गर्न चाहन्छन्। कहिलेकाँही उत्तम मद्दत सबैभन्दा सजिलो हुन्छ: साथी वा परिवारको सदस्यलाई पुग्न।
हेरचाह गर्नेहरूलाई सामान्यताको भावना चाहिन्छ जुन प्राय: पूर्वको सहकर्मीसँग हिंड्दा, पुरानो साथीहरूसँग खाजा खाने, वा बलिling गल्लीमा रातको रमाइलो गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
साथी र परिवारले महसुस गर्न सक्छन् कि उनीहरूले अतिरिक्त गर्नु पर्छ, वा उनीहरू तपाईंलाई सम्पर्क गर्न को लागी अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्छन्। साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग तालिका कायम गर्न प्रयास गर्नुहोस्, या त हरेक केही महिनामा फोन कल गरेर वा हप्तामा एक पटक खाजा बैठकहरू मिलाएर।
Aries. सीमाहरू सेट गर्नुहोस्
जब तपाईं हेरचाहकर्ता बन्नुहुन्छ तब सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनहरू मध्ये कसैले कसैको लागि निर्णय लिइरहेको हुन्छ। र व्यक्ति जो त्यो व्यक्ति लाई पनी प्रेम गर्छ सधैं तपाईले लिने निर्णय संग सहमत हुन सक्दैन।
तपाईं सबैलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्न, र दोस्रो अनुमान गरिएकोले तपाईंको बोझलाई थप गर्दछ। परिवार र साथीहरू जसले सहयोग प्रदान गर्न चाहन्छन् त्यस्तो गर्न सक्छन् जुन तपाईंको तालिकामा अवरोध गर्दछ।
त्यसोभए डाक्टरको भेटमा को उपस्थित हुनुपर्दछ, कहिले व्यक्ति भ्रमण गर्नुपर्दछ, र सहयोगका प्रकारहरू जुन तपाईंलाई वास्तवमै चाहिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट सीमा तोक्नुहोस्।
Yourself. मानसिक स्वास्थ्य सहित तपाईको लागि स्वास्थ्य लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
हेरचाहको भावनात्मक बोझले तपाईंलाई तपाईंको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बेवास्ता गर्न सक्छ।
व्यायाम र ध्यान जस्ता सकारात्मक व्यवहार महत्त्वपूर्ण बन्छ जब तपाईं भावनात्मक तनावमा हुनुहुन्छ। ती तपाईको रेसि thoughts विचारहरु लाई शान्त गर्न को लागी एक प्रभावी तरीका हो।
आफैंलाई यस्ता गतिविधिहरूको लागि प्राप्ति योग्य लक्ष्यहरू दिनुहोस्। फोन अनुप्रयोगहरूले दैनिक अनुस्मारकहरू र प्रिसेट प्रोग्रामहरू प्रदान गरेर मद्दत गर्दछ जुन १० देखि to० मिनेटसम्म हुन्छ।
Your। तपाईको हेरचाहको लागि यथार्थपरक लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक परेको बेला सहयोगको लागि सोध्नुहोस्
धेरै नै हेरचाह गर्ने अवस्थाहरू संकट मोडमा सुरु हुन्छ र त्यहाँ रहन्छ। हेरचाहकर्ता बर्नआउटको लागि निश्चित मार्ग हो।
चाँडै नै, तपाइँको डाक्टरसँग कामचलाउको वास्तविक स्तर पहिचान गर्न काम गर्नुहोस्। तपाईंको प्रियजनको हालको र भविष्यको आवश्यकताहरूको बारेमा सोच्नुहोस् र यदि तपाईं तिनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ कि।
उदाहरण को लागी, एक प्रगतिशील, दुर्बल रोग को साथ एक व्यक्ति अब सामान्य रुपमा कार्य गर्न सक्षम हुन सक्छ, तर के हुन्छ जब उनीहरुलाई बाथटब भित्र र बाहिर जान मद्दत चाहिन्छ?
तपाई कस्तो प्रकारको हेरचाह गर्न दिनुहुन्छ? तपाईं शट दिन सक्नुहुन्छ, वा IV ड्रिप्स मोनिटर? औषधी वा आवश्यक चीजहरू किन्नको लागि कारमा उनीहरूसँग ड्राइभ गर्ने बारेमा के हुन्छ?
तपाइँको अनौठो परिस्थितिमा केयरकेकिंगमा के जान्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस्, र तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर व्यावहारिक लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्।
आफैंलाई विस्तार गर्नाले तपाईंले हेरचाह गरिरहनुभएको व्यक्तिको लागि बर्नआउट (वा खतरनाक अवस्था) निम्त्याउन सक्छ।
१०. एक पेशेवरसँग कुरा गर्नुहोस्, एक चिकित्सक वा सामाजिक कार्यकर्ता सहित
हेरचाहकर्ता बन्नु भनेको तनाव र आघातको समय हो। यी समयहरू जब टक थेरापी अत्यन्त सान्त्वनादायी र हाम्रो सामना गर्न सक्ने क्षमताको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
परिवार र साथीहरू एक ध्वनि बोर्ड हुन सक्छ, तर तिनीहरूको पनि तपाईंले हेरचाह गरिरहनु भएको व्यक्तिको साथ नजिकको सम्बन्ध छ। यसले इमान्दार भई लाज, अपराधी वा रीसको भावनाहरू बारेमा छलफल गर्न गाह्रो बनाउँदछ - भावनाहरू जुन सामान्य र मान्य छन्।
तेस्रो पक्षसँग कुरा गर्दा तपाइँलाई आफैंलाई अभिव्यक्त गर्ने, केही भावनाहरु खुला राख्ने, र उनीहरुको सामना गर्ने रणनीतिमा काम गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।
११. आफ्नो प्रियजनको रोगको बारेमा व्यावहारिक हुनुहोस्
तेस्रो पक्षबाट सल्लाह लिनुको अर्को कारण ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो प्रियजनको पुनःप्राप्तिको लागि मार्गको बारेमा छलफल गर्न सक्षम हुनु - वा तिनीहरूको कुनै कमी छैन।
डिमेंशिया रोगीहरुका लागि दु: खको कुरा, त्यहाँ कुनै उपचार छैन। र डाक्टरहरू पक्का गर्न सक्दैनन् कि यो रोग कत्तिको चाँडो हुन्छ।
स्वीकृति भनेको केहि रोगहरुसँग व्यवहार गर्ने सबैभन्दा गाह्रो हिस्सा हुन सक्छ। हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं कि हाम्रा प्रियजनहरूले समस्याहरूलाई हराउनेछन्। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने बारे यथार्थमा सोच्न हामीलाई हाम्रो आशालाई घर हेरचाहको व्यावहारिक आवश्यकताहरूसँग सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ।
१२. कापी गर्ने रणनीतिहरू विकास गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ
सबै हेरचाह गर्ने अवस्था फरक हुन्छ र हरेक हेरचाहकर्ता पनि हुन्छ।
केहि व्यक्तिले एक्लोपनाको लागि समय लिने निर्णय गर्न सक्दछन् निर्णय गर्नु अघि उनीहरू वास्तवमै चाहेको कुरा समर्थन समूहमा सामेल हुने हो।
दैनिक आधारमा प्रतिलिपि गर्नु वास्तविक चुनौती हुन सक्छ। आफ्नो दिनको तनावपूर्ण भागहरू पहिचान गर्न कोशिस गर्नुहोस् र कसरी तपाईं त्यो तनाव कम गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईंले घरको मद्दत वा खाना डेलिभरी सेवा पाउँदा लाभ उठाउनुहुनेछ। यो सँधैका लागि आवश्यक पर्दैन, तर आफ्नो र तपाईको स्वास्थ्यको लागि पानी माथि राख्नु र तपाईको ख्याल राख्नु भएको व्यक्तिको प्राथमिकता हुनु पर्छ।
आत्म-देखभाल हेरचाहको हिस्सा हो
Caregiving प्रणाली को लागी एक झटका हुन सक्छ। हाम्रो वृत्ति हाम्रा प्रियजनलाई मद्दत पुर्‍याउनु हो, हामी आफैले मूल्य चुकाउनु पर्दैन। तर दिन, हप्ता, र महीनाहरु को रूपमा, हामी ऊर्जा को बाहिर चलान।
हेरचाह गर्नेलाई सम्झनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो: सफल हेरचाहमा आफैंको हेरचाह पनि समावेश छ।
Billie Paulette Montgomery, जो पेरीकी पत्नी:5छिटो तथ्यहरु तपाइँ जान्न आवश्यक छ
जोखिमपूर्ण साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
वालमार्ट फार्मेसी4र 10 डलर सूची
सामान्य रक्त शर्करा पढ्ने के हो
warfarin र coumadin के फरक छ
तपाइँको सामान्य रक्त शर्करा स्तर के हो?
कसरी छिटो मिनेट मा रक्तचाप कम गर्न को लागी